Horizon Chase Turbo: Steam နှင့်ပျော်စရာ Linux Racing Game Linux မှ
Horizon Chase Turbo: Steam နှင့်ပျော်စရာ Linux Racing Game
ခုထိလယ်ကွင်းထဲမှာ Linux အတွက်ရနိုင်သောဂိမ်းများသူတို့ကလွတ်လပ်တယ်၊ ပွင့်လင်းတယ်၊ ဇာတိဖြစ်သည်ဖြစ်စေ၊ မရှိသည်ဖြစ်စေငါတို့ကပုံနှိပ်ထုတ်ဝေသူတွေကိုမှတ်မိဖို့ ဦး စားပေးခဲ့တယ်။ FPS (ပထမပုဂ္ဂိုလ်သေနတ်သမား) အထူးသဖြင့်လွန်ခဲ့သောဆယ်စုနှစ်များစွာကလှပသောအချိန်များကိုပြန်သတိရသောသူများ သို့သော်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့ခေါ်သောအလွန်ကွဲပြားခြားနားသောဂိမ်းတစ်ခုအကြောင်းပြောလိမ့်မည် "Horizon Chase တာဘို" များအတွက်ရရှိနိုင် Linux ကို ဖြတ်. ရနှေးငှေ့.
အခြေခံအားဖြင့်၎င်းသည်စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ပျော်စရာကောင်းသည် ခေတ်ပြိုင်ပြိုင်ကားဂိမ်း ၏စတိုင်၌ "ကျောင်းဟောင်း"ဆိုလိုသည်မှာယခင် Race Games များကဲ့သို့သတ်မှတ်ပြီးလုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းရှိသည် အသက်အနှစ် "80 y က 90"ကဲ့သို့သော: "ထွက်ပြေး၊ ထိပ်တန်းဂီယာ၊ အလျင်စလို"ထိုအချိန်ကအခြားအသိမိတ်ဆွေများစွာတို့တွင်
ပြီးတော့ထုံးစံအတိုင်းပဲ၊ အပြည့်အ ၀ မသွားခင်အကြောင်းပြောဖို့ရှိတယ် "Horizon Chase တာဘို" ငါတို့ရဲ့ link ကိုငါတို့ချက်ချင်းထားခဲ့မယ် ယခင်ဆက်စပ် post နောက်ထပ်ထူးထူးခြားခြား Steam နှင့် Linux အတွက်အကြံပြုထားသောဂိမ်းထို့ကြောင့်ဤထုတ်ဝေမှုပြီးစီးပါက၎င်းအားစိတ်ပါဝင်စားသူများက၎င်းအားစူးစမ်းလေ့လာနိုင်ပြီးသိနိုင်သည်။
"Fury Unleashed သည် combo-based rogue action platformer တစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်သတ်တိုင်းသင် combo ကိုတိုးစေသည်။ အချို့သောသတ်မှတ်ချက်များကိုထိပါ၊ သင်၏ပျက်စီးမှုခုခံမှုနှင့်ကုသနိုင်သောစွမ်းအားများဝင်လာလိမ့်မည်။ ၎င်းသည်အဆုံးစွန် combo တွင်သင်ရိုက်နိုင်သောဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ သင်အလုပ်ပြီးသွားပြီလား။ ထို့အပြင် Fury Unleashed သည် Dead Cells နှင့် Rogue Legacy ကဲ့သို့ခေတ်သစ် roguelite platformers များမှလှုံ့ဆော်မှုများကိုပေါင်းစပ်ပြီးဖန်တီးခဲ့သည်။" Fury Unleashed: Linux ပေါ်တွင်ကစားရန်ပျော်စရာကောင်းသောခေတ်သစ်လှုပ်ရှားမှုဂိမ်း
1 Horizon Chase Turbo: ခေတ်သစ် Old School Racing Game
1.1 Horizon Chase Turbo Game ကဘာလဲ။
1.3 Steam ကို သုံး၍ Linux တွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ
Horizon Chase Turbo: ခေတ်သစ် Old School Racing Game
Horizon Chase Turbo Game ကဘာလဲ။
ပါဘဲ «Horizon Chase Turbo» သူ့၌ဖော်ပြထားသည် Steam Platform ရှိတရားဝင် site, အောက်မှာဖော်ပြထားတဲ့အတိုင်း:
"Horizon Chase Turbo သည် ၈၀ နှင့် ၉၀ ခုနှစ်များကနာမည်ကြီး hits များမှုတ်သွင်းထားသောပြိုင်ကားဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်: Out Run, Lotus Turbo Challenge, Top Gear (SNES) နှင့် Rush စီးရီးများ Horizon Chase Turbo ရှိအကွေ့တိုင်းနှင့်ကွေ့တိုင်းသည်ဂန္ထဝင် arcade ကစားနည်းကိုပြန်လည်ဖန်တီးပေးပြီးအကန့်အသတ်မရှိအမြန်နှုန်းပေးသည်။ အပြည့်အဝအခိုးအငှေ့ညှိရာသို့သွားနှင့်ပျော်မွေ့!"
ဖိုင်အရွယ်အစား: ၇ GB
ကစားသမားများ: ကစားသမား ၄ ဦး အထိ။
ကျား, မ: ပြိုင်ကား၊ Arcade ဂိမ်း။
ဖြန့်ချိသည့်ရက်နိုဝင်ဘာ ၂၈၊ ၂၀၁၈ ။
ပြုစုသူများ (တည်းဖြတ်သူများ): Aquiris Game Studio
ရရှိနိုင်ပါပလက်ဖောင်းPC (Windows နှင့် Linux), PS4, XBox နှင့် Nintendo Switch
ရရှိနိုင်သည့်ဘာသာစကားများဂျပန်၊ အင်္ဂလိပ်၊ ပြင်သစ်၊ ဂျာမန်၊ အီတလီ၊ စပိန်၊ ကိုးရီးယား၊ ပေါ်တူဂီ၊ ရုရှား၊ တရုတ်။
Steam ကို သုံး၍ Linux တွင်အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်များ
ရမ်)RAM 2GB အခမဲ့။
Disk Space (HD)ရရှိနိုင်သောနေရာ - 500 MB
ဂရပ်ဖစ် (GPU)Intel HD Graphics 4000 နှင့်ညီမျှသည်။
ပရိုဆက်ဆာ (CPU)Intel Core2Duo 2.0 GHZ၊ ညီမျှသို့မဟုတ်ပိုမြင့်သည်။
GNU / Linux ဖြန့်ဖြူးခြင်းUbuntu 16.04 နှင့်ညီမျှသည်။
"Horizon Chase Turbo" သည်အခမဲ့မဟုတ်၊ အခမဲ့လည်းမဖွင့်ပါသို့သော်၎င်းသည်ရရှိနိုင်ပါသည် ဇာတိကစားခဲ့သည် အပေါ် GNU / Linux များ ဖြတ်. ရနှေးငှေ့အဲဒါကြောင့်အဲဒါကိုသိဖို့ထိုက်တန်ပါတယ်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်တို့၏လက်တွေ့အခြေအနေနှင့်၎င်းအားအခမဲ့သရုပ်ပြမှုအပိုင်းကိုခံစားနိုင်စေရန်၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ download လုပ်လိမ့်မည် ဂိမ်းသရုပ်ပြကျွန်ုပ်တို့၏ install လုပ်ပြီးသား app ကိုသုံးပါ «Linux ပေါ်က Steam».
ပြီးတော့ငါတို့ရဲ့ပုံမှန်အတိုင်းဘဲ Linux ကို Respin လုပ်ပါ ကိုခေါ် အံ့ဖွယ်အမှုများ GNU / Linuxအပေါ်အခြေခံပြီးသော MX Linux ကို 19 (Debian 10), ငါတို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့အောက်ပါတည်ဆောက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ် «Snapshot MX Linux လမ်းညွှန်».
တခါ ဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီးထည့်သွင်း ပုံမှန်အတိုင်းနှိပ်ရန်သာလိုအပ်လိမ့်မည် play ခလုတ်နှင့်သွားပါမရ။ ကျွန်ုပ်တို့၌၎င်းကိုစုံလင်စွာခံစားနိုင်သည် Hardware နှင့် Software များ တွေ့ဆုံသည် အနည်းဆုံးလိုအပ်ချက်.
"Horizon Chase Turbo သည် ၈၀ နှင့် ၉၀ ခုနှစ်များမှဂန္ထ ၀ င်မျိုးဆက်များ၊ Outrun, Top Gear, Lotus နှင့်ဂန္တ ၀ င်မျိုးဆက်အားလုံးမှလှုံ့ဆော်သောလျင်မြန်သောပြိုင်ကားဂိမ်းဖြစ်သည်။" Steam တွင် Horizon Chase Turbo
မှတ်ချက်: အကြောင်းပိုမိုလေ့လာသင်ယူရန် "Horizon Chase တာဘို" ၎င်းရဲ့အပိုင်းကို ၀ က်ဆိုက်မှာသွားကြည့်နိုင်ပါတယ် က Epic Games Store က.
တိုတိုပြောရရင် "Horizon Chase တာဘို" စိတ်ဝင်စားစရာ၊ ပျော်စရာကောင်းသည် ခေတ်ပြိုင်ပြိုင်ကားဂိမ်း ၏စတိုင်၌ "ကျောင်းဟောင်း"ဆိုလိုသည်မှာယခင်ရှိပြီးသား Racing Games များကဲ့သို့သတ်မှတ်ပြီးလုပ်ဆောင်ချက်ဖြစ်သည် "80 y က 90", ကဲ့သို့ , "ထွက်ပြေး၊ ထိပ်တန်းဂီယာ၊ အလျင်စလို"ထိုအချိန်ကအခြားနာမည်ကြီးများထဲတွင်မရ။ သူတို့ကလူကြီးလား၊ လူငယ်လား၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေငါကစားတာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ လူများစွာဟာငါ့မှာကောင်းမွန်တဲ့အချိန်ရှိလိမ့်မယ်ဆိုတာငါသေချာတယ်။ Demo ရရှိနိုင်သည် ဒါမှမဟုတ်ဂိမ်းတစ်ခုလုံးဝယ်ပါ။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » applications များ » Horizon Chase Turbo: Steam နှင့်ပျော်စရာ Linux Racing Game
Glibc 2.34 သည်အားနည်းချက်ပြင်ဆင်မှုများ၊ Linux အတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အသစ်များနှင့်အခြားအရာများပါလာသည်
Google သည် Qualcomm ကိုအမှီ ပြု၍ ကိုယ်ပိုင်ပရိုဆက်ဆာများထုတ်လုပ်လိမ့်မည်